टिकिरहन गाह्रो रहेछ
सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउने भनेर योजनाहरू धेरै बनाउँछ । तर ति योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित हुन्छन् । कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजना बनाउन सरकार चुकेको देखिन्छ । सरल ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन नसक्नु एउटा कमजोरी हो भने अर्काे बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु । किसानले आफूले दुःख गरेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । गाई पाल्यो दुध सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था, तरकारी लगायो बारीमै कुहिने अवस्था छ, कुखुरा पाल्यो जिउँदै गाड्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारको आर्थिक वर्षको योजना हेरेर युवाहरू केही समय कृषिमा उत्साहित भएर लाग्छन् तर पछि त्यसको प्रतिफल राम्रो नभएपछि विकल्प खोज्न थाल्छन् । ति मध्ये एक हुन् डेष्टिनेसन एग्रो फार्मका प्रोपाइटर प्रकाश पन्त । पन्तले भक्तपुरको झौखेलमा ३ वर्षदेखि गाई फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् तर त्यसबाट उनी सन्तुष्ट छैनन् । किन यस्तो भयो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संगीता पनेरुले पन्तसँग गरेको कुराकानी :
गाई फर्मबाट आम्दानी त राम्रै गरिरहनु भएको होला नी है ?
खै के सन्तुष्ट भन्नु । कृषि नै देश विकासको मुख्य आधार हो भनेर लागियो । तर अहिले किन यस्तो गरिएछ भनेर पछुत्तो पनि लाग्छ कहिलेकाँही । किनकी राज्यले हामी जस्ता युवाहरूको लागि भनेर कुनै पनि योजना ल्याउन सकेन । ल्याएका केही योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गरेन । यसले गर्दा हामी जस्ता युवाहरू कृषि पेशामा लाग्नु ठिक रहेनछ भन्ने लाग्छ । मैले ४ करोडको लगानीमा गाई फर्म खोलेँ । त्यसमा न त सरकारी पक्ष अनुगमनको लागि जान्छ । न त तालिमको व्यवस्था गर्छ न सरल ब्याजमा ऋण दिएर प्रोत्साहन नै गर्छ । त्यसले गर्दा हामीले मात्र चाहेर नहुने रहेछ ।
एउटा युवा विदेश जाने अथवा राम्रो जागिर खाने रहर थियो होला ? किन कृषि पेशा नै रोज्नु भयो त ?
एउटा एनजिओ Empowerment of Rural Women In Makwanpur District, Supported by DFID , UK नामक संस्थामा गर्थेँ । काम गर्नेक्रममा हामी जस्ता युवाहरूले कृषि पेशालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने लागेर आयो र भक्तपुरको झउखेल ८ मा ३५ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर गाई फर्म सञ्चालन गरेँ । अरु युवाहरूलाई पनि प्रोत्साहन होस् भनेर । २२ वटा गाईबाट सञ्चालन भएको फर्ममा अहिले ७६ वटा गाई पुगे । तर म अहिले सन्तुष्ट हुन सकिन ।
तपाईंले यत्रो फर्म सञ्चालन गर्नुभएको छ राज्यले कहि न कहि त सहयोग गरेको होला नी ?
राज्यले अहिलेसम्म एक रूपैयाँको पनि सहयोग गरेको छैन । हामीलाई बिटा बिटा पैसा दिइयोस् भन्ने अपेक्षा होइन । मात्र के हो भने सरकारले किसानको हितमा नीति बनाउने र बनाएका नीतिगत कुरा कहाँ र किन रोकिएको छ त्यसमा ध्यान दिइ जुन पार्टीको सरकार आए पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर सरकार यस्तो कुरामा ध्यान नै दिँदैन ।
तपाईंले ऋण त कृषि विकास बैंकबाट नै त लिनुभएको होला नी ?
मैले कृषि विकास बैँकबाट अहिलेसम्म ऋण पाएको छैन । मैले गरेको सबै लगानी ग्लोबल आइएमई बैंकबाट ऋण लिएर हो । र बाँकी आफ्नो स्थिर सम्पति बेचको पैसाबाट ।
सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
कृषिमा उत्साहित किसानलाई सजिलो गरी जग्गा लिजमा लिने वातावरण बनाइदिनुप¥यो । प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनुप¥यो । १०० प्रतिशत पशु बिमा हुनुप¥यो, भ्याक्सिनको सुविधा दिनुप¥यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बजार व्यवस्थापन हो । किसानले अहिले पनि ३२ रूपैयाँ लिटरमा दुध बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर किन्दा त्यही दुधको मूल्य ८० देखि ९० रूपैयाँ पर्छ । त्यसले गर्दा गाई पाल्ने किसानले भन्दा बिचौलीयाले बढी पैसा कमाइरहेको अवस्था छ । किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई सरकारले नै किनिदिनु प¥यो भन्ने मेरो माग हो ।
भनेपछि तपाईले कृषिको विकल्प खोज्नुभएको छ ?
अहिले नै विकल्प त खोजिहालेको होइन । तर राज्यको पारा यही हो भने त हामी जस्तो मान्छे टिकिरहन धेरै गाह्रो हुन्छ ।
प्रस्तुत अन्तवार्ता ऐक्यबद्धता मासिकको २०७२ पुष अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ ।